फोटोशप प्रभावहरू: तिनीहरू के हुन्, त्यहाँ के छन् र तिनीहरूलाई कसरी लागू गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | | मा अद्यावधिक गरियो 30/04/2021 09:24 | ट्यूटोरियलहरू
फोटोशप प्रोग्राम प्रोफेशन्स द्वारा धेरै जसो प्रयोग गरिन्छ, तर धेरै जसलाई रचनात्मक डिजाइनमा प्रोत्साहित गरिएको छ। इन्टरनेट मा तपाईं सक्नुहुन्छ टोन फोटोशप प्रभावहरू फेला पार्नुहोस् जसको साथ तपाईंको छविमा मोहर प्राप्त गर्न र परिणाम अविश्वसनीय छ।
र किन ती प्रयोग गर्ने? कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो पुस्तकको कभर गर्नुपर्दछ। यो एक तपाईंले प्रभाव पार्नु पर्छ र यसको लागि तपाईंले फोटो खिच्नु भएको छ जुन सही छ। तर त्यसरी राखिए, थप विज्ञापन बिना, यसले केही पनि भन्दैन। यसको सट्टा, फोटोशप प्रभावहरू प्रयोग गरेर, तपाईं यसलाई अर्को जस्तो देखाउन सक्नुहुन्छ, सच्चा विशेषज्ञ द्वारा बनाइएको। अब त्यहाँ कतिजना छन्? र ती कसरी हुन्छन्?
1 फोटोशप प्रभावहरू, ती कसरी सिर्जना गरिन्छ?
1.1 Bokeh प्रभाव
1.2 फोटोशप प्रभावहरू: छविलाई कालो र सेतोमा बदल्नुहोस्
1.3 फोटोशप प्रभावहरू: ओर्टन
1.4 इंस्टाग्राम Gingham प्रभाव
1.5 जल रंग प्रभाव
फोटोशप प्रभावहरू, ती कसरी सिर्जना गरिन्छ?
यदि तपाईंले फोटोशप प्रभावहरू खोज ईन्जिनमा राख्नुभयो भने, कुनै श doubt्का बिना तपाईंले लाखौं परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ तपाईले धेरै पाउनुहुनेछ ट्यूटोरियल तपाईंको फोटोको साथ साँचो ट्रिकहरू बनाउन सक्षम हुन। र, तपाईले चाहानु भएको तस्विरमा निर्भर गर्दै तपाई एक प्रभाव वा अर्को छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ प्रभावमा कार्यक्रममा समावेश गरीएको हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने, जसरी इन्स्टाग्राम वा अन्य समान प्रभावहरूसँग देखा पर्न सक्छ, उत्तर होईन। तपाईंले तिनीहरूलाई मैन्युअल रूपमा गर्नुपर्दछ, त्यसैले किन धेरैले अन्वेषण गर्न सकिने धेरैमध्ये केही मात्र सिक्न सक्छन्।
यद्यपि, इन्टरनेटमा तपाईं उनीहरूको ठूलो संख्या फेला पार्न सक्नुहुनेछ, र यही हो जुन हामी तपाईंलाई आज छोड्दैछौं। यहाँ तपाईं सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको फोटोशप प्रभावहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, वा ती, तिनीहरूको स्वभाव द्वारा, तपाईंको ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Un "Bokeh" तस्बिर प्रकाशको बाहिरका फोटोहरू हुन्, तर ती छविलाई जादुई स्पर्श दिन्छन्। यो गर्न, तपाईले निम्न गर्नु पर्छ:
पृष्ठभूमि तह थप्नुहोस् (तह / नयाँ पृष्ठभूमि तह)। तपाईंले यसलाई गाढा बोकेहको साथ राख्नु पर्छ। यहाँ तपाईं फाईल / स्थान एम्बेडेड तत्वमा जानु पर्छ।
गुणको वा स्क्रिनमा त्यस लेयरको ब्लेन्डिंग मोड परिवर्तन गर्नुहोस् र यसको अस्पष्टतालाई थोरै कम गर्नुहोस्।
फोटोशप प्रभावहरू: छविलाई कालो र सेतोमा बदल्नुहोस्
निश्चित रूपमा अहिले तपाई किन यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ कि किन रंग र photo्ग कालो र सेतोमा बदल्नुहोस्। र सत्य यो हो कि यसको एक धेरै सरल उत्तर छ: छविलाई जोड दिन। यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, हामी र colors्गमा यस्तै ब्यबहार भएका छौं, विभिन्न रes्गमा सबै चीजहरू हेर्न, कि कालो र सेतो फोटोले हाम्रो ध्यान खिच्छ किनकि "यो सामान्य छैन।"
यस पटक यो फोटोशप प्रभाव तपाईले गर्न सक्ने सजिलो मध्ये एक हो, र वास्तवमा हामी यसलाई सिफारिस गर्दछौं, उदाहरणका लागि, कभरहरू, पोष्टरहरू वा प्रोजेक्टहरूको लागि जसमा तपाईंलाई छविमा कुनै वस्तु वा व्यक्ति हाइलाइट गर्न आग्रह गरिएको हुन्छ।
र यो कसरी गरिन्छ? नोट लिनुहोस्:
एक पटक तपाईले फोटोशप र प्रोग्राममा आफ्नो छवि खोल्नु भएपछि तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो चरण भनेको पृष्ठभूमि तह नक्कल गर्नु हो। तपाईं यो धेरै सजीलै गर्नुहुन्छ किनकि तपाईंले पाठ पृष्ठभूमि तहमा पाठ्यक्रम राख्नु भएको छ, दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "डुप्लिकेट लेयर" मा थिच्नुहोस्। अर्को विकल्प छिटो, Ctrl + J दिनु हो (तर तपाईंसँग पृष्ठभूमि तह चयन गरिएको हुनुपर्दछ।
अर्को, तपाइँलाई "स्मार्ट वस्तु" बन्न त्यो नक्कल तह चाहिन्छ। तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? ठीक छ, उही तहमा, यो चयन गरिए पछि, तपाईले दायाँ क्लिक गर्नुपर्नेछ र "स्मार्ट वस्तुमा रूपान्तरण गर्नुहोस्"।
अब, छवि / समायोजन / कालो र सेतोमा जानुहोस्। बक्समा देखा पर्दछ, केहि परिवर्तन नगर्नुहोस्, ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
अन्तिम कुरा, तपाईले ब्लिन्डिंग मोडलाई गुणाका लागि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र अगाडि नियन्त्रण कालोको रूपमा र पृष्ठभूमि नियन्त्रण सेतोको रूपमा हुनुपर्दछ, तह / नयाँ समायोजन तह / ग्रेडियन्ट नक्शामा जानुहोस्। एकपटक सकिएपछि, फोटो उत्तम कालो र सेतोमा हुनेछ।
फोटोशप प्रभावहरू: ओर्टन
ओर्टन प्रभाव यसले तपाईंको छविहरू शक्तिशाली, जादुई पनि देखिनेछ। तपाईं टोन र र withहरूसँग मिल्दोजुल्दो पार्नुहुनेछ जुन अर्को संसारबाट देखा पर्नेछ। यस कारणका लागि, यो आदर्श हो यदि तपाईं परिदृश्य, फोटोग्राफहरूको फोटोहरूको साथ काम गर्नुपर्‍यो ... सामान्यतया, कुनै पनि छवि जहाँ तपाईं समग्रको सुन्दरता हाइलाइट गर्न चाहानुहुन्छ।
र यो कसरी गरिन्छ?
एक पटक तपाईंसँग फोटोशप र तपाईंको छवि खुला छ, मेनू लेयर / डुप्लिकेट तह दिनुहोस्।
त्यो तहको मिश्रण मोड "रास्टर" हुनुपर्दछ। फेरी त्यो लेयर नक्कल गर्नुहोस्।
यस सेकेन्डमा, तपाइँ फिल्टर / ब्लर / गाउसी ब्लरमा जानु पर्छ। त्यहाँ, लगभग १ p पिक्सेलको दायरा सेट गर्नुहोस्। यसलाई स्वीकार गर्न दिनुहोस् र तपाईं परिवर्तन देख्नुहुनेछ। अब गुणन गर्न ब्लिन्डिंग मोड परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईंले प्रभाव पाउनुहुनेछ।
इंस्टाग्राम Gingham प्रभाव
के तपाईंलाई सम्झना छ? जिingगैम प्रभाव तपाईको इन्स्टाग्राममा छ? ठिक छ, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं सजिलैसँग यो फोटोशपमा पुन: उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
तह / नयाँ समायोजन तह / एक्सपोजरमा जानुहोस्। यहाँ तपाईलाई गामा सुधार र अफसेट दुबै चाहिन्छ, किनकि यसले तपाईलाई कालो स्वर दिन्छ। ठीक थिच्नुहोस्।
तह / नयाँ समायोजन तह / स्तरहरूमा जानुहोस्। यसमा तपाईंले विगतकोमा हराउनु भएको कन्टेस्ट पुन: प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। कसरी? बाकसलाई दायाँ सिफ्ट गर्नुहोस्। ठीक थिच्नुहोस्।
फेरी, तह / समायोजन को नयाँ तह / ह्यू / संतृप्ति। तपाईंले संतृप्ति स्तर अलि कम गर्न आवश्यक छ।
तह / नयाँ तह यो गहिरो गाढा निलो रंग्नु पर्छ। अब, तपाईंले अस्पष्टता कम गर्नुपर्नेछ। अन्तमा, ब्लेन्डिंग मोड "नरम प्रकाश" मा परिवर्तन गर्नुहोस्। र voila!
जल रंग प्रभाव
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने एक छविलाई पानीको रंगमा रूपान्तरण गर्दै, तपाईं यो फोटोशप शैलीहरूको साथ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
पहिले, तपाईंले खाली "क्यानभास" सिर्जना गर्नु पर्छ। यो गर्नका लागि हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं फाइल / नयाँमा जानुहोस्। मापन को लागी तपाइँको छवि को मिलान को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
फिल्टर / फिल्टर ग्यालरीमा जानुहोस्।
बनावट चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि Texturize।
निम्न प्यारामिटरहरू लागू गर्नुहोस्:
स्केल: १ 130०।
हल्का: तल्लो दाँया।
अब तपाईं आफ्नो छवि संग आफैलाई राख्न छ। यो गर्नका लागि तपाईले बनाउनु भएको क्यानभासमा छवि तान्नु पर्छ।
फिल्टर / फिल्टर गैलरी। कलात्मक भाग छनौट गर्नुहोस् र रंगिएको रंगमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले यी प्यारामिटरहरू लागू गर्नुपर्दछ: बनावट, १; छाया तीव्रता, ०; ब्रश विवरण, १.. ठीक थिच्नुहोस्
छवि / समायोजन / ह्यू / संतृप्ति। यहाँ तपाईले विन्डोमा -75aको संतृप्ति राख्नुपर्नेछ। ठिक छ हिट
छवि / समायोजन / चमक / कन्ट्रास्ट। चमक 72२ मा बढाउनुहोस्। ठीक थिच्नुहोस्।
अब, छवि तह चयन गरेर, तल्लो दायाँ कुनामा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई मास्कमा राख्नुहोस्।
ब्रश चयन गर्नुहोस् र यसलाई कालो बनाउनुहोस्। अलि अलि गरेर तपाईंले आफ्नो मास्क सिर्जना गर्नुहुनेछ। तसर्थ, तपाईं यसलाई केवल कालोमा राख्नुहुने छैन, तर बिभिन्न रंगहरूमा।
एक पटक तपाईले सक्नु भएपछि तपाईले तहहरूलाई मिलाउनु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशप प्रभावहरू
एनिमेटेड gifs कसरी बनाउने
कसरी फोटोशपको साथ पृष्ठभूमि धमिलो पार्ने, चरण-देखि-चरण